“Ninkaa Talyaaniga Ahi Waa Beenaale” – Cristiano Ronaldo Oo Aflagaaddo Ugu Jawaabay Wasiirka Ciyaaraha Talyaaniga – Laacibnet.net
“Ninkaa Talyaaniga Ahi Waa Beenaale” – Cristiano Ronaldo Oo Aflagaaddo Ugu Jawaabay Wasiirka Ciyaaraha Talyaaniga
October 16, 2020 Abdiwahab Ahmed
Wasiirka Ciyaaraha waddanka Talyaaniga ayaa shalay ku eedeeyey Cristiano Ronaldo inuu jabiyey sharciga xakamaynta xanuunka Korona Fayras kaddib markii uu dib ugu soo laabtay Talyaaniga isagoo qaba xanuunkan oo isku og, kana soo duulay waddanka Portugal, laakiin Cristiano Ronaldo ayaa kaga jawaabay in eedayntaasi ay tahay mid been ah.
Cristiano Ronaldo oo Jimcihii maanta la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inuu u hoggaansamay dhamaan shuruucda waddankaas iyo kuwa ilaalinta xakamaynta xanuunkan oo aanu wax qalad ah samaynin, isla markaana uu gutay masuuliyadihiisa.
“Ma jiraan wax tilmaamo ah oo aan jabiyey.” Ayuu si kooban u yidhi Cristiano Ronaldo.
Xiddiga Juventus oo si toos ah ugu jawaabayay wasiirka ciyaaraha Talyaaniga ayaa yidhi: “Waxay sheegayaan inaan sharciga Talyaaniga, laakiin dhamaantood waa been. Waxa aan la hadlay kooxdayda, waxaana na saaran masuuliyad ah in aanu wax walba sida saxda ah u samayno.
“Wax kasta ogolaansho ayaa lagu sameeyey, waxa uu sheegay ninka Talyaaniga ah ee aanan magaciisa sheegayna, waa been, anigu waxaan u hoggaansamay dhamaan shuruucda.”
Cristiano Ronaldo waxa uu intaa kaddib sharraxaad ka bixiyey sida isaga iyo carrurtiisu ay guriga ugu wada nool yihiin iyadoo uu xanuunka Korona Fayraska qabo, waxaanu yidhi: “Anigu dabaq ayaan ku noolahay, carruurtayduna midka kale. Tobanka maalmood ee soo socdana sidaas ayay ahaanaysaa.
“Way adag tahay in aanan xidhiidh la yeelanin, laakiin waa inaanu ixtiraamno sharciga.”
CR7 ayaa sawirro laga soo qaaday isaga oo taagan barandaha gurigiisa oo isku dhigaya qorraxda, waxaana uu tilmaamay in ay arrintaasi tahay sir ay faa’iido badan oo caafimaad ku jirto, waxaanu yidhi: “Qorraxdu in badan ayay caawisaa. Dadku malaha dareenkaas, waxyaabo badan ayay tartaa.
“Marka aan fursad u helo, waxa aan isku dhigaa qorraxda. Magaalada Turin, way adag tahay laakiin haddana waxaan isku dayaa inaan qorraxda helo 20 ama 30 daqiiqadood. Waxa laga helaa Fiitamino badan, sida C iyo D oo heerkoodu sarreeyo, Selenium, Omega 3, waana in si fiican wax loo cuno oo jimicsi la sameeyo.”